ခေါက်သိမ်းနိုင်သောခရီးသွားအိတ်ပေးသွင်းသူနှင့်လက္ကား - တရုတ်စက်ရုံ - Sellers Union
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > သိုလှောင်ခြင်း > ခရီးသွားသိုလှောင်ရေး > ခေါက်သိမ်းနိုင်သောခရီးသွားအိတ်
ရေစိုခံနိုင်သည့်ပမာဏကြီးမားသောခရီးသွားသိုလှောင်ခြင်းခရီးဆောင်အိတ် Duffel ပေါ့ပါးသောအိတ်ဖိုင်တွဲခရီးသွားအိတ်။
Thisခေါက်သိမ်းနိုင်သောခရီးသွားအိတ်suitable for women, men, teens and big kids, great idea as personal item for airline travel and emergency spare bag in the suitcase.
Waterproof Large Capacity Travel Storage Luggage Duffel Lightweight Bag ခေါက်သိမ်းနိုင်သောခရီးသွားအိတ်
ရေတွက် / Ctn
1000pcs / အရောင်
˜DURABLEMATERIAL - ပေါ့ပါးသောရေစိုခံနိုင်သည့်အပြင်မျက်ရည်စိုခံနိုင်သည့်အောက်စဖို့ဒ်ထည်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဒီသေတ္တာသည်ခိုင်ခံ့ပြီးအကြမ်းခံ။ သယ်ဆောင်ရန်လုံလောက်သည်။ 50 ပေါင်ထက်ပိုမိုဆောင်သော Greattenacity နှင့်ခံစားမှု။
˜အိတ်ဆောင် & အဆင်ပြေ - အိတ်သည်နေ့စဉ်သုံးခြင်းသို့မဟုတ်ရံဖန်ရံခါခရီးသွားခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ထူးခြားသောဒီဇိုင်းကခရီးဆောင်ရာတွင်အဆင်ပြေလွယ်ကူသောခရီးဆောင်အိတ်ပေါ်တွင်အလွယ်တကူတပ်ဆင်ထားနိုင်သည့်အရွယ်အစားဖြစ်သည်။
˜LIGHTWEIGHT & MULTI-POCKET - နေ့စဉ်ရေကြောင်းခရီးသွားလာမှုအတွက်အကောင်းဆုံးသောရေစိုခံနိုင်လွန်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ဖြုတ်တပ်နိုင်သောဖြန့်နိုင်သောပခုံးကြိုးနှင့်အတူလာပါ။ အိတ်ထဲတွင် zipperpockets ၂ ခုနှင့် mesh pocket ၃ ခု။
အသေးစိတ်ဓါတ်ပုံများ FoldableTravel Bag ။
ကျွန်ုပ်တို့တွင် FoldableTravel Bag အတွက် BSCI စာရင်းစစ်စက်ရုံရှိသည်။
ထုပ်ပိုး and delivery of Foldable Travel Bag.
ငွေပေးချေပြီးနောက် ၃-၅ ရက်အကြာတွင်နမူနာများကိုကျွန်ုပ်တို့အဆင်သင့်ပြင်ပါမည်။
hot Tags:: ခေါက်သိမ်းနိုင်သောခရီးသွားအိတ်, တရုတ်, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ, လက်ကား, စက်ရုံ, စျေးပေါပေါ၊ အနိမ့်စျေး၊ စိတ်ကြိုက်ပစ္စည်းများ
ဒိန်ချဉ် Cooler အိတ်